Newsenepal:: ओली सरकारलाई ठाडो चुनौती, आजदेखि देशभर अनिश्चितकालीन बन्द
काठमाडौं – कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अत्यावश्यक क्षेत्रमा हड्ताल गर्न नपाइने भनेर गरिएको निर्णय सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै आज शुक्रबारदेखि देशभरका सरकारी चिकित्सकले अस्पतालका सेवा बन्द गर्ने भएका छन् ।
सरकारले हालै गरेको समायोजनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारी चिकित्सकहरू विरोधमा उत्रिएका छन् । वृत्ति विकास लगायतका पक्षमा असर परेको जनाउँदै शुक्रबारदेखि आकस्मिक सेवा बाहेकका सेवा अनिश्चितकालीनरुपमा बन्द गर्ने चिकित्सकले जनाएका छन् ।
चिकित्सकले सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) को आह्वानमा शुक्रबारदेखि विरोधमा उत्रिने बताएका छन् । शुक्रबारदेखि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक सेवा बाहेकका अन्य सेवा अनिश्चितकालीनरुपमा बहिष्कार गर्ने गोदानका अध्यक्ष डा. दिपेन्द्र पाण्डेले बताए ।
‘अवैज्ञानिक र असमान तरिकाले समायोजन गरिएको छ । अन्यायपूर्ण ढंगले समायोजन गर्दा डाक्टरको अध्ययन तथा वृत्ति विकासमा असर गर्ने भएको छ,’ उनले भने । बुधबार बसेको संघको आकस्मिक बृहत् भेलाले समायोजन पत्र नबुझ्ने निर्णयसमेत गरेको थियो ।
वैज्ञानिक ढंगले चिकित्सकको समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले गरे तापनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरेकोले आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको अध्यक्ष पाण्डेले बताए । चिकित्सकको वृत्ति विकासको स्पष्ट खाकासहित ऐन निर्माणपछि मात्र समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने चिकित्सकको माग छ ।
स्वास्थ्यका कर्मचारीको समतामूलक स्थान, वृत्ति विकासको सवालमा सरकार गम्भीर नभएकोले आन्दोलनमा उत्रनु परेको उनले बताए ।
सरकार मातहतका सम्पूर्ण चिकित्सकले घोषणा गरेको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दै नेपाल चिकित्सक संघले अविलम्ब सम्बोधन गर्न जोडदार माग गरेको छ । चिकित्सकको समायोजन सम्बन्धमा गरेको विवादास्पद निर्णयविरुद्ध ध्यानाकर्षण भएको संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले बताए ।
स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकहरूलाई राज्यले मानमर्दन गर्ने, बेवास्ता गर्ने कार्य दुर्भाग्यपूर्ण रहेको कुरा चिकित्सक संघको ठहर छ । यस्ता कार्यले सेवामुखी पेसाप्रति आकर्षण घटाउनुका साथै हाल कार्यरत चिकित्सकहरुमा मनोबल घटाउने भएकाले समस्याको यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न चिकित्सक संघले सरकारसमक्ष अपिल गरेको छ ।
216204/5/2019 @ 12:18